Ugu fiican ee Shirarka BIM 2019 - Geofumadas
Juunyo, 2019 Engineering, tabo cusub
Egeomates ka qeyb galay mid ka mid ah dhacdooyinka caalamiga ah ee ugu muhiimsan ee la xiriira BIM (Building Information Maganement), waxa uu ahaa European BIM 2019 shir, lagu qabtay Auditorium AXA ee Barcelona-Spain. Munaasabadan waxaa ka soo baxay waayo-aragnimada BIM, halkaas oo aad ku dareemi kartid waxa ku iman doona maalmaha soo socda.
Maalintii kowaad ee khibrada BIM, hawlaha waxaa loo qaybiyey saddex mawduuc si ay dadkii soo xaadiray u fiirsadeen foojignaantooda iyadoo loo eegayo danahooda, tan koowaad Ku dhiso BIM, labaad Barnaamijyada iyo barnaamijyada BIM, iyo midka saddexaad ee cinwaankeedu yahay BIM oo leh ciriiri weyn. Shirkadda Roca waxay ka qaybgashay wakiilkeeda Ignasi Pérez, oo sharraxay muhiimadda ay leedahay BIM dhismaha, iyo sidoo kale soo bandhigay sida xogta Intelligence for Building: DIN2BIM by PINEARQ, o Maareynta mashaariicda isku dhafan ee loo marayo iyada oo loo marayo BIM loo yaqaan 'Open BIM' ee TeamSystems
Intii lagu jiray dhacdadan, waxaan fursad u helnay inaan la kulmo dhowr ka mid ah wakiillada shirkadaha hormoodka ah ee dunida BIM, kuwaas oo aan ku soo sheegnay BASF, taas oo muujisay Xeeladaha Dhismayaasha Horumarinta, software kaas oo u oggolaanaya in uu dedejiyo raadinta badeecadaha iyo walxaha BIM. BASF waxay soo bandhigeen sida ay u adeegsadaan kumbuyuutarkooda kiis dhab ah, iyada oo loo marayo tiknoolojiyadda dhabta ah ee farsamada.
Kiisaska la soo gudbiyey, waxay muujinayaan booqashada shaqada iyo sida qaabka BIM loo maamulay waqtiga dhabta ah iyadoo xalka ay soo bandhigtay barnaamijkeeda, isagoo awood u leh inuu arko natiijadiisa kama dambeysta ah; Tani waxay ahayd ciyaar aad u haboon oo ay sameeyeen BASF, oo sidoo kale soo bandhigtay dhagaystayaasha a kartoonada inaad ku noolaato khibrad dhamaystiran.
"Mashruuc gaar ah, waxa uu kugula talinayaa waxa alaabooyinka lagama maarmaanka ah uuna kuu ogolaanayo inaad soo dejiso dhammaan macluumaadka badeecadahaas, oo ay ku jiraan sheyga BIM si toos ah isaga oo aan haysan laybareeriga oo isticmaalo feylka". Albert Berenguel - Maamulaha Suuqa Yurub ee BASF Chemicals Spain
Sidoo kale, waxaa la og yahay in kooxda shirkadda Visual Lab Technology loogu tala galay in la abuuro xal u ah dhammaan ku lug silsilad ah ee dhismaha, sida lagu daydo BIM hogaanka gashto-koob dhab dalwaddii / qabsiyo ama qalab mobile sida gacanta ama kiniin , iyada oo ujeedadu tahay in la maareynayo BIM goobta shaqada. Waxay bixiyaan wax badan oo ka mid ah adeegyada ay ka mid yihiin: BIM isdhexgalka si dhab dalwaddii iyo xaqiiqada qabsiyo, lagu daydo multi-VR BIM ama video 360º / 3D-360º sawir.
"Visual Techology waxay bixisaa codsiyada ku shaqeeya moobiilka ama kiniinka iyo waxa aan qabano waxay ku dhigaan sanduuqa casharka ee tusaalahan, si toos ah u calaamadee saamiga iyo dhoofinta sanduuqa casharka, ma aha nooca oo dhan, kaliya waxa aan rabno, Moobaylka, oo horey u soo xiray teknooloojiyeyaasha haddii ay tahay Apple ARKit ama Android ARCore, waxaa suurtagal ah in wax laga beddelo qiyaasta nooca, la tasho nooca alaabta ama walxaha ku jira qaabka, qaabka, dhameeyo oo abuuro isku-dhafid ". Iván Gomez - Sawirada Technology
Markaas sii uunana socod ku soo bandhigay kasta oo ku hadla ee, waxaan ka heli wakiilka of Lumion Sanchiz Alba, kuwaas oo sharaxay sida version cusub Lumion 9, qalab shaqeeya - mid ka mid ah ayaa dhihi kara, in ka badan waxtar u leh kuwa u baahan in la isticmaalo wakhti dheeraad ah ee dhismaha dhismaha marka loo eego habka qaabaynta. Kumbuyuutarku wuxuu u ogolaanayaa soo dejinta qaababka CAD / BIM waxayna siiyaan hab fudud.
"Lumion 9 taageertaa software BIM iyo naqshad sida Sketchup., Wiyisha, Graphisoft ArchiCAD, Autodesk 3DS Max, Allplan, Revit, Vectorworks iyo AutoCAD" Alba Sanchiz -LUMION
wakiilada GRAPHISOFT tusay version cusub ee ArchiCAD 22, mid ka mid ah Horseedka ee software BIM dunida - maamulka xogta iyo isuduwidda jeedo projects- soo bandhigtay Nidaamka cusub ee tababarka.
"Mashruuca tababarka wuxuu ku salaysan yahay nidaam rukun ah, oo aad uwanaagsan, oo loogu talagalay ardayda iyo xirfadlayaasha labadaba, adigu ma bixinaysid koorso gaar ah, laakiin adoo raacaya liiska waxaad heleysaa dhammaan koorsooyinka iyo heerarka ay ku jiraan , iyada oo ku xidhan baahida loo qabo isticmaalaha, dhammaantood ansaxiyay oo shahaadad ku saaray GRAPHISOFT ". GRAPHISOFT-ARCHICAD
Waxaad is illowsiin kartaa wakiilada 5 dalalka nordigga, Denmark, Sweden, Finland, Iceland iyo Sweden for edition this gaar ah BIM 5ta Summit- kasta oo mid ka mid ah bandhigyo uu diiradda on -Guests in ay tusinayaan in weli ay jirto Siyaabo dheer oo aad ku geli karto mawduuca BIM.
Ka mid ah jibbaarka ah, Gudni Gudnasson, kuwaas oo ka hadlay oo dhan caqabadaha soo bandhigay by fulinta tabaha BIM sidoo kale Jan Karlshoj sharxi saamaynta shuruudaha guud ee openBIM ee Denmark, ugu dambeyntii ay muujineysaa Anna Riitta Kallinen in tusay ahaa Mashruuca RASTI, oo ah istaraatijiyad iyo waddo loogu talagalay qaabeynta maareynta macluumaadka ee deegaanka la dhisay.
Waxaan sii wadi safarka of bandhigyo, la soo bandhigidda by wakiilka ka mid ah assama Bentley Systems Anna, kuwaas oo qaatay xanuun in la fahmo muhiimadda ay leedahay tabo cusub farsamada, xiriirka ay la leeyihiin deegaanka, iyo sida Bentley ayaa bedelay jahooyinka ay dhex this aragti cusub oo ah in lagu daro bay'ada wareegga nolosha ee dhismaha.
"Synchro, ma aha mid siman 4D iyo mudada, waa mashruuc lagu maamulayo maamulka" - Ana Assama - Bentley Systems
Markaas assama sharaxay, waa maxay qalabka in Bentley bixisaa, laga bilaabo uumiga xogta falanqaynta adeegga daruur-daruur awoodaha jira - bi- Power, qorsheyneysa - SYNCHRO dhigteen, gacanta iyo geynta -SYNCRO XR- qaadashada oo dhan cunto quudin, dhammaystiran oo sidaas abuuraya nidaam midaysan.
"Synchro wax laakiin barnaamijka design la Synchro qorshayn karto iyo macluumaadka ay u maareeyaan, kaliya qaadashada 3D daydo xogta shaqada, ie bilaabi taariikhaha iyo dhamaadka, waxay la qiyaasay karo sida uu noqon doono dhammaystirka hawsha la qaar ka mid ah Analytics "Anna Assama - Bentley Systems
Qaababka digital waxay hadda qeyb ka noqon kartaa xaqiiqda jireed, iyada oo loo marayo Synchro XR ee Hololens, oo ah arrin lagama maarmaan u ah xaqiiqda isku dhafan, taas oo ah, hadda waad awoodi kartaa dhisaan iyada oo la tixgelinayo xaqiiqada deegaanka.
Mid ka mid ah wararka ugu muhiimsan, kuwaasi oo ay ku xusan Summit BIM ku 2019, waa in dawladda ee Catalonia, waa waajib isticmaalka BIM tartamada oo dhan, waayo, shuqullada rayidka ah iyo dhismaha; Tan waxaa lagu dhawaaqay Xoghayaha Guud ee Degaanka iyo Waaritaanka Awoodda Guud ee Catalonia - Ferrán Falcó. Qiyaasta ayaa dhaqan gali doonta 11 bisha Juun ee sanadkan, waxayna yeelan doontaa lacag ka badan lacagtii 5,5 million euros. Waa in la ogaadaa, in gobollo badan oo Spain ah, isticmaalka BIM loo isticmaalo mashruucyada dhismaha dadweynaha
In edition 5ta ee BIM Summit, ma waxaad dooran kartaa taas oo ahayd ugu fiican, sababtoo ah siinaya bidhaamaysa wax kasta oo midaynaysa network shirkado badan oo waaweyn, dhexdhexaad ah ama yar yar, cilmi, aqoonyahano, ardayda, waxay ka dhigan tahay dunida weyn suurtogalnimada, taas oo xirfadleyaal badani ay jeclaan lahaayeen in lala xiriiro.
Waxay muujineysaa sida ay u soo bandhigeen bandhigeyaashooda, si ay u muujiyaan mid kasta oo ka mid ah casriyaddooda casriga ah, ayna martida ka dhigaan inay fahmaan sida ay u bedeli karaan qaabka aanu u qeexno adduunkeena hadda jira iyo abuurista waxqabadyo cusub ama shay si deg deg ah, waxtar leh.
Waxaan mahad u celineynaa cidii bixiyo sharaxaad of BIM, oo soo bandhigay tabo cusub, oo ay ka mid yihiin xubno ka mid ah Solutions simbim, BIM Academy, MUSAAT, ASSA ABLOY, ACCA, CALAF, ArchiCAD, Smart Building, Institute of Technology ee dhismaha Catalonia- oo dhan IteC, ProdLib. Pinearq, TeamSystem Construction iyo Construsoft, tan dambe ayaa la gudoonsiiyay abaalmarinta ah ee daacad BIM Summit 2019 this.
Waxaan rajaynaynaa in ay dhacdo soo socda ee la xidhiidha arrintan, waxaana rajeynayaa ay ka mid yihiin teknoolajiyada sida GIS - Geographic Information Systems, loo baahan yahay si loo ogaado dhaqdhaqaaqa da'ayeen, xidhiidhka ay la leedahay BIM iyo silsilad oo dhan ee ku lug leh mashruuca dhismaha ah. Waxaan horey u soconaa!
Post Previous«Previous Tijaabinta saxnaanta xogta kor u kicinta Google - Soo rar!
Post Next Waxaan soo saarey Geo-Engineering - WargeyskaNext »